कोरोना त्रास : रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने खानेकुरा खाऔँ – डा. उमेश श्रेष्ठ – Himal FM 90.2 MHz
कोरोना त्रास : रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने खानेकुरा खाऔँ – डा. उमेश श्रेष्ठ
पूर्वका खबर स्थानीय समाचार adminhimal March 14, 2020
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासले नेपाललाई पनि छोएको छ । यहि विषयमा निरोगधाम, ललितपुरका डा. उमेश श्रेष्ठसंग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोनाको डरले त्रसित हुनु पर्ने अवस्था छ ?
आत्तिनु पर्दैन । अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा यो कोरोना प्रमाणित रुपले देखा परेको अवस्था छैन । चिन छिमेकी देश भएकाले त्यहा छ, यहाँ चाँडै आउछ भन्ने बुझ्नु हुदैन् । हामीले आफ्नो स्याहार आफैले ग¥यौ, सतर्क अपनायौँ भने सर्दैन ।
भनेपछि हामीले इम्युनिटि पावर (रोग प्रतिरोध शक्ति) बढाउनु प¥यो ?
अवश्य पनि, किनभने हामीले इम्युनिटि पावरमा ध्यान दिएनौ भने मात्र विभिन्न भाईरसहरुले सताउने हो । त्यसकारणले गर्दा हामीले इम्युनिटि पावर बढाउने हो ।
तर नेपाल भित्री भयो भने त सरकारको तयारी सन्तोष छैन नि त ?
यो चिडियाखानामा राखेको बाघ जस्तो फत्केर आउने हैन । यो चाहीँ जुन मान्छेको रोग प्रतिरोध गर्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले अर्को रोग लागेको व्यक्तिसंग सिधा सम्पर्क ग¥यो भने मात्रै सर्नेे हो । अहिले सम्मको अन्तराष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने ९७ प्रतिशत मान्छे निको भइसकेका छन् र ९१ प्रतिशत मान्छे सजिलैै निको भइरहेकाले यो रोगसंग डराउनु पर्ने अवस्था छैन् ।
डर मानेका नेपालीलाई तपाईको सुझाव के त ?
सबैलाई म भन्छु की, आफ्नो क्षमता बढाउने, चिल्लो पदार्थ, काँचो, चिसो पदार्थहरु नखाने, सवै कुरा राम्ररी पकाएर मात्र खाने, शारिरीक व्यायमहरु गर्ने, तातोपानी खाने, अनि हिमाली क्षेत्रमा कोदो पाइन्छ, त्यस्तो परिकार खाने जस्ले शरिरको इम्युनिटि बढाउछ ।